Global Voices teny Malagasy » Notanan’ny Fampanoavana miaramila vonjimaika nandritra ny 15 andro ilay bilaogera Ejipsiana Alaa Abdel Fattah · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Avrily 2019 3:41 GMT 1	 · Mpanoratra Rasha Abdulla Nandika (fr) i Samy Boutayeb, Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Notanana ny Alahady 30 Oktobra (2011) haharitra ny 15 andro ilay bilaogera Ejipsiana efa tranainy Alaa Abdel Fattah  (@alaa ) taorian’ny nandàvany ny fakàn’ny miaramila mpanao fanadihadiana am-bavany azy, izay nitakiany ny zony hotsaraina eo anoloan’ny fitsarana sivily.
Nampanantsoina mba hohadihadiana i Alaa herinandro alohan’izay noho ny hetsika Maspiro tao Kairo, izay nahitana olona miisa 27 maty ary maro hafa naratra izay niharan’ny famoretana nataon’ny miaramila tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana izay Kristiana ny ankamaroany. Navitrika tokoa i Alaa taorian’ireo tranga mampalahelo ireo ary nijanona roa andro tao amin’ny tranom-paty niaraka tamin’ireo mpikatroka hafa mba hanehoana ny firaisankinan'izy ireo tamin’ireo fianakavian’ny niharam-boina, sady niezaka ny nandresy lahatra azy ireo mba hanaiky ny fandidiam-paty sy nanome toky azy ireo fa ho taterina araka ny tokony ho izy ny valin’ny fandidiam-paty. Nitantara ity zava-nitranga ity tamin’ny fomba tena nampihetsim-po i Alaa, tao amin’ny gazety AI Shorouk ( misy dikanteny amin’ny teny Anglisy eto ). Tsy nitsahatra ny nampatsiahy ny manodidina azy izy tao anatin’izany fa ao anatin’ny firaisankina no ahitana ny famahana ireo olana izay handalovan’i Ejipta.
Mbola tany San Francisco i Alaa raha nantsoina mba hanaovana fanadihadiana. Nankany amin’ny fitsarana ny rainy Ahmed Seif EI Islam Abdel Fattah, izay mpisolovavan’ny zon’olombelona efa hatry ny ela mba hangataka ny hanemorana ny raharaha. Rehefa niverina tany Kairo i Alaa ny Asabotsy tolakandro dia nankany amin’ny fitsarana ny Alahady maraina. Niampanga azy tamin’ny vesatra miisa dimy ny mpampanoa lalana miaramila noho ny fihetsiketsehana: ny fandrisihana hanao fihetsiketsehana, ny herisetra natao tamin’ireo mpikambana ao amin’ny tafika, ny fanimbana ny fananam-bahoaka ary ny fangalarana ny fitaovam-piadiana miaramila. Nitaky ny hanaovan'ny mpitsara sivily ny fanadihadiana ny anabavin’i Alaa, Mona Seif (@monasosh ) izay iray amin’ireo mpikambana mpanorina ny vondrona “Manohitra ny tribonaly miaramila atao amin’ny vondron’ny olom-pirenena’’, satria mpiaro ny raharaha izay ahitana azy ho voampanga ihany koa ny tafika ka mety hahatonga ny fifandonana mazava ara-tombontsoa. Notanan’ny fampanoavana miaramila vonjimaika izy noho izany.
Mpikambana mavitrika amin’ny sehatry ny bilaogera Ejipsiana i Alaa nanomboka tamin’ny taona 2004, fony izy sy ny vadiny Manal Hassan (@manal)  nanangana ny bilaogy sy ny fanangonam-baovao nahazo loka ‘’ Manal and Alaa’s Bit Buck’’ (www.manalaa.net ). Naneho fahavitrihana an-tserasera sy ivelan’ny Aterineto ireo bilaogera anankiroa ireo tamin’ny tolona manohitra ny fitondrana teo aloha tany Ejipta sy tamin’ny fampahafantarana ny fampahalalam-baovao mahazatra ny raharaha mikasika ny kolikoly sy ny herisetra ataon’ny mpitandro ny filaminana. Efa notanana nandritra ny 45 andro i Alaa tamin’ny taona 2006.
Namoaka fanambarana an-gazety, manameloka amin’ny fomba hentitra indrindra ny fitazonana an’i Alaa ny vondrona “Manohitra ny tribonaly miaramila atao amin’nysivily’’ ary nitaky ny famotsorana azy tsy misy hatak’andro, miaraka amin’ireo lasibatra miisa 12.000 hafa izay niharan’ny tribonaly miaramila tany Ejipta, ary farafaharatsiny tokony mba hotsaraina manoloana ny fitsarana sivily izy ireo. Niantso ny Ejipsiana ny vondrona mba handà ny fiaraha-miasa rehetra miaraka amin’ireo fakana ambavany avy amin’ny miaramila ary mba hanohana ny anton’ny hijoroan’ny vondrona “Manohitra ny tribonaly miaramila atao amin’ny vondron’ny olom-pirenena’’. Azo jerena ato  ny lahatsoratra feno momba ny fanambarana an-gazety nataon’izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/19/137110/
 Alaa Abdel Fattah: http://en.wikipedia.org/wiki/Alaa_Abd_El-Fatah
 misy dikanteny amin’ny teny Anglisy eto: http://bit.ly/tptHCx